RootCoin စျေး - အွန်လိုင်း ROOT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို RootCoin (ROOT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ RootCoin (ROOT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ RootCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
ROOT – RootCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ RootCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
RootCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
RootCoinROOT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00552RootCoinROOT သို့ ယူရိုEUR€0.00468RootCoinROOT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00422RootCoinROOT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00505RootCoinROOT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0502RootCoinROOT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0349RootCoinROOT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.122RootCoinROOT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0206RootCoinROOT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00737RootCoinROOT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00771RootCoinROOT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.126RootCoinROOT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0428RootCoinROOT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0292RootCoinROOT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.414RootCoinROOT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.92RootCoinROOT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00758RootCoinROOT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00834RootCoinROOT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.171RootCoinROOT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0385RootCoinROOT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.584RootCoinROOT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩6.59RootCoinROOT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.09RootCoinROOT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.405RootCoinROOT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.153
RootCoinROOT သို့ BitcoinBTC0.0000005 RootCoinROOT သို့ EthereumETH0.00001 RootCoinROOT သို့ LitecoinLTC0.0001 RootCoinROOT သို့ DigitalCashDASH0.00006 RootCoinROOT သို့ MoneroXMR0.00006 RootCoinROOT သို့ NxtNXT0.453 RootCoinROOT သို့ Ethereum ClassicETC0.000774 RootCoinROOT သို့ DogecoinDOGE1.63 RootCoinROOT သို့ ZCashZEC0.00007 RootCoinROOT သို့ BitsharesBTS0.213 RootCoinROOT သို့ DigiByteDGB0.211 RootCoinROOT သို့ RippleXRP0.0183 RootCoinROOT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000195 RootCoinROOT သို့ PeerCoinPPC0.0198 RootCoinROOT သို့ CraigsCoinCRAIG2.58 RootCoinROOT သို့ BitstakeXBS0.241 RootCoinROOT သို့ PayCoinXPY0.0988 RootCoinROOT သို့ ProsperCoinPRC0.71 RootCoinROOT သို့ YbCoinYBC0.000004 RootCoinROOT သို့ DarkKushDANK1.81 RootCoinROOT သို့ GiveCoinGIVE12.25 RootCoinROOT သို့ KoboCoinKOBO1.29 RootCoinROOT သို့ DarkTokenDT0.00508 RootCoinROOT သို့ CETUS CoinCETI16.33
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 18:05:01 +0000.